အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို အားပေးကြောင်း တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယမင်းသမီး ပရီယန်ကာ ချိုပရာ ဝေဖန်ခံနေရ
အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို အားပေးကြောင်း တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့တဲ့...
13 ส.ค. 2562 - 23:33 น.
ပရီယန်ကာ ချိုပရာ ဟာ ဘောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွေမှာရော၊ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွေမှာပါ သရုပ်ဆောင်ခဲ့
ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြား တင်းမာမှုတွေ ကြီးထွားနေချိန်မှာ အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို ထောက်ခံ အားပေးတယ်လို့ တွစ်တာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ရေးတင်လိုက်တဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းသမီး ပရီယန်ကာ ချိုပရာ ဟာ စစ်ဖြစ်အောင် အားပေးနေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ပရီယန်ကာ ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ အလှအပရေးရာ ညီလာခံကို တက်ရောက်လာတဲ့ ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွားအမေရိကန်နိုင်ငံသူ တစ်ဦးက ပရီယန်ကာဟာ အပြောနဲ့ အလုပ်မညီသူ တစ်ဦးလို့ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက ပရီယန်ကာ ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အဓွန့်ရှည်ပါစေလို့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ စာကြောင်းကို တွစ်တာပေါ်မှာ ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက နျူကလီယား ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအကြား စစ်ရေးအရ ရန်လိုမှုတွေ ကြီးထွားလာနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကုန်ရက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Beautycon အလှကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ညီလာခံတစ်ခုရဲ့ စင်မြင့်ပေါ်က ပရီယန်ကာကို ပရိသတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အေရှာ မာလစ် ဆိုသူ အဲဒီ ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွားအမေရိကန်နိုင်ငံသူ က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။
"လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားဖို့ ကိစ္စတွေ ပြောနေတာ ကြားရတော့ ခံရခက်မိပါတယ်။ ရှင်ဟာ အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်မျိုး လုပ်တတ်သူ ဆိုတာကို အိမ်နီးချင်း ပါကစ္စတန်လူမျိုး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက သိနေပါတယ်"လို့ အေရှာ မာလစ် က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပရီယန်ကာ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက တင်ခဲ့တဲ့ တွစ်တာပို့စ်ကို ရည်ညွှန်းရင်း အေရှာ မာလစ်က "ရှင်က ကုလသမဂ္ဂမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး သံတမန် တာဝန်ယူထားတယ်၊ ပြီးတော့ ပါကစ္စတန်ကို နျူကလီးယား စစ်မဆင်နွှဲဖို့ တိုက်တွန်းတယ်၊ ဒီတော့ ဘယ်ဟာကို ယုံရမှာလဲ" လို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် သူဆက်မေးခွန်း မထုတ်နိုင်ခင် သူ့ဆီက မိုက်ခရိုဖုန်းကို ပွဲစီစဉ်သူတွေက ဆွဲယူသွားခဲ့ပါတယ်။
ယူနီဆက် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များ ရံပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ ချစ်ကြည်ရေး သံတမန်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက တာဝန်ယူလာခဲ့တဲ့ ပရီယန်ကာ က သူ့မှာ ပါကစ္စတန်က သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သူဟာ စစ်ကို ကြိုက်သူ မဟုတ်ပေမဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ရှိသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ ကက်ရှ်မီးယားဘက်ခြမ်းမှာ ပါကစ္စတန်အခြေစိုက် အကြမ်းဖက်အုပ်စု တစ်စုက လုပ်ခဲ့တာ ဆိုတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အိန္ဒိယ စစ်သား ၄၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့အပြီးမှာ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်အကြား ဆက်ဆံရေးဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ပိုင်နက်နယ်မြေပေါ်ကို အိန္ဒိယက လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပါကစ္စတန်က တန်ပြန် တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ချိန်မှာ ပရီယန်ကာ က သူ့ရဲ့ တွစ်တာမှာ ရေးတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်မမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်မက အိန္ဒိယကပါ။ စစ်ပွဲ ဆိုတာကြီးကို ကျွန်မ တကယ်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ရှိသူပါ။ ဒီတော့ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့သူတွေ၊ ချစ်ခဲ့သူတွေ ကျွန်မကြောင့် စိတ်နာ စိတ်ထိခိုက်သွားရတယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစွန်းမရောက်အောင် ရှောင်ရှားတဲ့ ရပ်တည်ချက်မျိုး ကျွန်မတို့အားလုံး ထားဖို့ လိုပါတယ်" လို့ ပရီယန်ကာက မစ်စ် မာလစ်ရဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုချက်ကို တုံ့ပြန် ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မစ်စ် မာလစ် ပြောခဲ့တဲ့ လေသံကိုတော့ ပရီယန်ကာက ပြန်ပြစ်တင် ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
"ကလေးမ ကျွန်မကို လာအော်မနေပါနဲ့၊ ကျွန်မတို့က မေတ္တာတရားအတွက် ဒီမှာ ရောက်နေကြတာပါ၊ မအော်ပါနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိက္ခာမချစမ်းပါနဲ့၊ ကျွန်မတို့ အားလုံး အစွန်းမရောက်ဖို့ လိုပါတယ်၊ ရှင့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရော၊ ရှင်မေးတဲ့ မေးခွန်း၊ လေသံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" လို့ ပရီယန်ကာက တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပရီယန်ကာရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ဟာ သူ့အပြစ်ကို ကိုယ့်အပြစ် ဖြစ်အောင် လုပ်သလိုမျိုးသာ ဖြစ်တယ်၊ လူတွေ သူ့အပေါ် မကောင်းမြင်လာစေတယ်လို့ မစ်စ် မာလစ်က နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ တွစ်တာပေါ်ကနေ ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦး အပြန်အလှန် ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွစ်တာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အမြင်သဘောထားတွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မစ်စ် မာလစ် မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကို ဆုံးအောင် ပရီယန်ကာ နားထောင်သင့်တယ်လို့ အတော်များများက ယူဆနေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တချို့ကတော့ ပရီယန်ကာဘက်က ဘာမှ အမှားမလုပ်ခဲ့ဖူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို အားပေးကြောင်း တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယမင်းသမီး ပရီယန်ကာ ချိုပရာ ဝေဖန်ခံနေရ